စတိဗ်ရော်ဂျာမော်ကွန်းတိုက် - Brick Fanatics
06 / 09 / 2021 06 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 138 Views စာ0မှတ်ချက် 71031, 71031 Marvel စတူဒီယို, Captain America, ကလင် Barton, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego, Lego မှ marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Marvel, Marvel ဖုတ်ကောင်, ပိုစတာ, စတိဗ်ရော်ဂျာ, ကဗျာ, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, ဖုတ်ကောင်, ဖုတ်ကောင်ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်, ဖုတ်ကောင် Hunter Spidey, ဖုတ်ကောင်
27 / 08 / 2021 27 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 214 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego မှ marvel, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, Marvel ဖုတ်ကောင်, MCU, ရောဘတ် Kirkman, Sean Phillips က, စတိဗ်ရော်ဂျာ, အဆိုပါ LEGO Group, အဆိုပါလမ်းလျှောက်သေ, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, ဖုတ်ကောင်ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်
26 / 08 / 2021 27 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 178 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, Captain America, Captain America: The First Avenger, ဗိုလ်ကြီးဂarter, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney+, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego မှ marvel, Lego Minifigures, Marvel, သေးသေးလေး, Peggy ကို Carter, အနီရောင် ဦး ခေါင်းခွံ, စတိဗ်ရော်ဂျာ, အဆိုပါ LEGO Group, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
23 / 08 / 2021 24 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 249 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Avengers, Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, Avengers: Infinity စစ်ပွဲ, Captain America, Captain America နှင့် Winter Soldier, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, hulk, Lego, Lego Avengers Endgame, Lego မှ marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Marvel, Marvel's Avengers Infinity စစ်ပွဲ, စတိဗ်ရော်ဂျာ, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, အဆိုပါဆောင်းရာသီ Soldier
13 / 08 / 2021 13 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 205 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, 76060 Doctor Strange ၏ Sanctum Sanctorum, ၇၆၁၉၀ Iron Man: Iron Monger Mayhem, 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man, 76200 Bro Thor ရဲ့ New Asgard, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, Captain America, Captain America: The First Avenger, ဗိုလ်ကြီးဂarter, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, ဆရာဝန်ထူးဆန်း, အရူးဖြစ်၏ ဟူ. ၎င်း၏ Multiverse အတွက်ဆရာဝန်ထူးဆန်း, Lego, LEGO စုဆောင်း Minifigures 71031 Marvel စတူဒီယို, Lego မှ marvel, Lego Minifigures, Marvel, သေးသေးလေး, Peggy ကို Carter, အနီရောင် ဦး ခေါင်းခွံ, စတိဗ်ရော်ဂျာ, အဆိုပါ LEGO Group, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
01 / 08 / 2021 28 / 07 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 244 Views စာ0မှတ်ချက် 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man, 76200 Bro Thor ရဲ့ New Asgard, 76201 ဗိုလ်ကြီးဗြိတိန်နှင့် The Hydra Stomper, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, ကာတွန်း, ဗိုလ်ကြီးဂarter, Disney, Disney+, Lego, Lego မှ marvel, Marvel, အနီရောင် ဦး ခေါင်းခွံ, သမာဓိ, စတိဗ်ရော်ဂျာ, Watcher, တိုနီ Stark, Valkyrie, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
09 / 07 / 2021 09 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 314 Views စာ0မှတ်ချက် 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, Captain America, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney+, Gamora, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego မှ marvel, Marvel, Peggy ကို Carter, ပင့်ကူအဓိပတိ, စတိဗ်ရော်ဂျာ, Thanos, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?